- Mpitantara amin'ny radio : Lasa, lasa, niakatra, mamakivaky ny vodilaharana, mahazo eo amin'ny sisiny ankavia, maka bahana, maka bahana, daka, maaaaty, maty ny bôla, 4 no ho aotra ny isa eny amin'ny tabilao. - Zaman'i Jao : Mahay zalahy Makabàna ein, zay bôly jiaby azon'i Makabàna, maty fo jiaby, izy nahafaty bôly efatra io. Aza malahelo loatra Barea, fa mila an'i Makabàna isika amin'ny afara. Tafandria mandryPatrick
Manana dokotera Malagasy mahay isika, na La Réunion, na Maurice aza manafatra dokotera Malagasy anampy azy. Manana ny fitaovana fitilana sy fitsaboana rehetra ihany koa eto Madagasikara raha ny aretina mpahazo ny rehetra, mety lafo ny sarany ho an'ny vahoaka, fa misy ny fitaovana, na eny amin'ny hopitaly tsy miankina, na eny amin'ireo hopitalim-panjakana. Safidy izany ny hoe te hitsabo tena any ivelany, ka aoka samy hiantoka ny fitsaboana azy ireo tompon'andraikitra ambony mangataka ny ho tsaboina any ivelany, na ilay Evasan. Tsy tokony ny vahoaka Malagasy kosa no hiantoka ny haitraitran'ireo mpitondra te hitsabo tena any ivelany, eny averiko tsara haitraitra, satria ampy ny fitaovana eto ary mahay ny dokotera Malagasy. Tafandria mandry.Patrick
- Ilay 73.5kg nijaikojaiko tsy natao fanambaràna hitsaka ranomasina, fa tsy niasa andro fety ny douane ; - Ilay 1 938.95kg, nandeha ara-dalàna hitam-poko hitam-pirenena fa tsy nisy niverina ny vola taminy, alako Rakoto Jean Paul mba namerina ny atsasa-bokatra. Tafandria mandry ePatrick
dimanche, 21 mars 2021 20:17
Pilo kely : Mitaky ny amehana ara-pahasalamana ny famerana ny fivezivezena
Ny Lalampanorenena dia milaza mazava fa manan-jo hivezivezy malalaka manerana ny tanin'i Repoblika malagasy, miditra sy mivoaka ny sisin-tanimpirenena ny Malagasy sy ny mponina rehetra ato aminy. Io Lalampanorenana io ihany koa no manome alalana ny Filoham-pirenena andray fepetra hamerana izay fahafahana izay, amin'ny alalan'ny fametrahana ny amehana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka tsy ampy izany ny filazana fa mikatona manomboka amin'ny talata izao i Mahajanga sy Nosy be, na ny fivezivezena anabakabaka, na ny fivezivezen'ny olona an-tanety, fiara madinika sy taxi-brousse, ankoatran'ny fitanterana entana. Ny sidina rehetra anatiny dia miantona avokoa manomboka ny talata izao amin'ireo faritra roa ireo, ary ny sidina iraisam-pirenena farany any Nosy be dia amin'ny sabotsy izao ny farany, ary izany dia mandritra y 15 andro. Dia efa mila tonga any Nosy be izany rahampitso aaltsinainy izay anainga ho any ivelany sabotsy, fa talata efa mikatona Nosy be. Tafandria mandry ePatrick
samedi, 20 mars 2021 19:49
Pilo kely : Covid-19 aretin'ny mpanan-karena ?
Rehefa apetraka ny fepetra, arovava orona, ny elanelana sy fanasan-tanana, dia ao ny milaza fa aretin'ny mpanan-karena io fa izahay efa zatra miosom-bovoka ka tsy matahotra izany aretina izany intsony, firy ireo mitsindroka fako tsy marary. Rehefa tonga indray ilay kaly tsinjo, vatsy tsinjo, vola azo tamin'ny Covid-19, ry zareo milaza fa aretin'ny mpanan-karena indray no tena milaza, aiza ny anjaranay madinika. Ka maninona tsy omena ny mpanan-karena hianjadian'io aretina io ny vatsy tsinjo, ka tsy izy indray angaha no voan'ilay aretina ka ny tsy voa no ahazo fanampiana. Tafandria mandry aby e.Patrick
jeudi, 18 mars 2021 20:20
Mandidy ny fanjakana fa TSY MAINTSY mihinana CVO+ izay marary Covid
Mety afangarondry zareo ny ordonnance lalàm-panjakana sy ordonnance dokotera. Tanfadria mandry e.Patrick
mercredi, 17 mars 2021 19:42
Pilo kely : Aina fa tsy aingitraingitra ny bourse
Taux bourse 2021 : Équipement : 66 000ar/anBourse mensuelle pendant 9 mois année scolaire : Master : 48 400ar L3 : 36 300arL2 : 30 250arL1 : 24 200ar
mardi, 16 mars 2021 20:40
Honorable, voambolana vaovao
Ny vahoaka mpandoa hetra, patron mpandoa vola sy manome karama indray no miantso ny mpiasany hoe Honorable, fanetren-tena tsy misy toy izany, izy samy mpiasa mifanome voninahitra hoe Honorable. Tratra antitra e Tafandria mandry aby Honorable namakoPatrick
lundi, 15 mars 2021 19:29
Pilo kely : Ambelao nareo zandry mpianatra reo
Na hendry reo na maditra, anakatsika reo mpianatra reo, atsika ray amandreny faute tsy manome bourse ndreo io, na ino na ino fanazavana. Na atsika mizaka amindreo hoe tsisy eky bourse zany, dia efa haindreo zay, fa raha atsika mijanjy hoe mahazo bourse anareo, dia aboahy agny bourse ndreo, fa aza ampijaliana sy gadraina na tifirina basy sy grenade reo. Bonne nuit abyPatrick
dimanche, 14 mars 2021 20:05
Anao mindragna ndraiky magnano tômpiny
Pilo kely : Anao mindragna ndraiky magnano tômpiny Il s'appelle "revient". Bonne nuitPatrick